Mitsitsia fotoana handokoana ny sarinao amin'ny Illustrator | Famoronana an-tserasera
Lokoy amin'ny fotoana firaketana ny sary nataonao
Judit Murcia | | sary
Illustrator dia a fitaovana famolavolana izay manome antsika fitaovana maro hahatratrarana vokatra matihanina. Azontsika atao ny mitrandraka ny loharanonao tsy misy fetra ary mianatra ny fitaovana fototra izay atolotray antsika dia lakilen'ny fanombohana manararaotra azy.
Raha nanomboka tamin'ny tontolon'ny sary ianao ary tianao ny manazava, mamorona kapoka ary manome endrika ny hevitrao fa sarotra ho anao ny mandoko ny faritra tsirairay amin'ny borosy, aza manahy, misy fitaovana iray izay Hanome anao io fotoana tsy ampy io ianao.
Ny dingana voalohany dia mamorona sary amin'ny kapoka. Tokony ho ireo mihidy, izany hoe miray hina. Fa maninona Mba hampiasa ny fitaovana fandokoana mifandraika, izay ahafahantsika mandoko ny faritra tsirairay haingana sy mora.
1 Manomàna kapoka ao amin'ny Illustrator
3 Hoso-doko mifampitohy
4 Fivarotana loko
Manomàna kapoka ao amin'ny Illustrator
Vantany vao noforonina ireo tsipika, dia mifantina azy ireo isika ary amin'ny menio ambony dia manaraka ity làlana manaraka ity izahay: Object - Live Paint - Mamorona. Amin'ity dingana ity dia afaka mampiray ireo kapoka isika na dia samy hafa aza ny toerana misy azy ireo. Safidy iray hafa dia hanitatra ny fifantenana rehetra.
Manaraka izany, afaka miala ny safidiny isika ary mankany amin'ny anjan'ny izay hitranga amin'ny iray amin'ireo sisiny isika. Izahay dia mitady ny sary famantarana ny Hoso-doko mifampitohy. Ny fidirana haingana dia tratra amin'ny alàlan'ny fanindriana ireo lakile, raha mampiasa fitaovana Apple, fn + K. Raha tsy hita ny baraovana dia mankanesa any amin'ny menio ambony ary araho ity lalana manaraka ity: Window - Fitaovana.
Raha vantany vao hitantsika ary nofidintsika ny fitaovana fandefasana loko, hisafidy ny loko tadiavina isika ary hampihatra izany amin'ny faritra tsirairay. Ny iray amin'ireo tombony azo amin'ny fampiasana an'io fitaovana io dia ny fametrahana mazava tsara sy ny fotoana itehirizantsika. Mamela antsika hanao a fitiliana betsaka kokoa amin'ny loko.
Raha efa manana ny loko marina izay tiantsika hampiasaina isika, dia afaka mamonjy ireo loko hapetrantsika ao amin'ireo santionany ary rehefa manana ilay fitaovana enti-mandoko vita amin'ny hosodoko voafantina isika, dia ho hitantsika fa boaty miloko telo no hiseho eo ambonin'ny sary, mifanaraka amin'ny loko efa nohirizinay tao anaty santionany. Azontsika atao ny manova ny loko tiantsika hampiharina amin'ny alàlan'ny zana-tsipìka fitendry.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » sary » Lokoy amin'ny fotoana firaketana ny sary nataonao